feed - Synonyms of feed | Antonyms of feed | Definition of feed | Example of feed | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for feed
Top 30 analogous words or synonyms for feed
အင်ဂျင်ခန်း သင်္ဘောပေါ်တွင် သင်္ဘောကိုရွေ့လျားပေးသော Main Engine နှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးသော auxiliary engines (Generator) တို့အပြင် တခြားသော ပိုမိုသေးငယ်သည့် စက်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်ကြသည်။ လေဖိစက်(air compressor)၊ feed pumps နှင့် fuel pups ကဲ့သိုသော စက်များဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ထိုစက်များကို သေးငယ်သော ဒီဇယ်အင်ဂျင်များ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မော်တာများ နှင့် မောင်းနှင်ကြသည်။ သို့သော် ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အသုံးပြုမှုများလဲ ရှိကြသေးသည်။
မာ့ရှ်မဲလို Marshmello's stage name, an alternative spelling of "marshmallow", and his marshmallow mascot head were both inspired by electro house music producer and DJ deadmau5, who also notably uses an alternate spelling for his stage name and performs wearinga"dead mouse" mascot head. Acknowledgement of deadmau5's contribution to Marshmello's persona is evident in the music video for "Alone," which features Marshmello's pet mouse, Joel (Joel Zimmerman is deadmau5's real name). While Marshmello has not yet confirmed his true identity, the most widespread speculation is that, he is Chris Comstock, who is also known as Dotcom. Journalists have also speculated that Marshmello could be Martin Garrix, Jauz, oracollective of producers and DJs managed by Shalizi. On March 4, 2017, Feed Me posted an Instagram story of Dotcom in Marshmello's costume and another person with Marshmello's helmet.
မြန်မာဘလော့များ မြန်မာဘလော့ဂါများ အများဆုံး အသုံးပြုသော ဘလော့နည်းပညာ ပလက်ဖောင်းမှာ blogspot နှင့် wordpress တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကနဦးဘလော့ အများစုမှာ blogspot ကို အသုံးပြုထားသော ဘလော့များ ဖြစ်ကြပြီး ၂ဝဝရခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် blogspot များဝင်ရောက်ရ ခက်ခဲသွားခြင်းများ ကြောင့် wordpress ကို အသုံးများလာကြပြန်သည်။ အချို့သော ဘလော့များသည် CMS နည်းပညာ ကို အသုံးပြု၍လည်း ဘလော့တည်ဆောက် ထားကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ဘလော့နည်းပညာနှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုသော widget များအနက် မြန်မာဘလော့ဂါ အသိုင်းဝိုင်းအတွင်း အသုံးများသော widget တစ်ခုမှာ CBOX ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် chat box သို့မဟုတ် shout box ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ဘလော့အဝန်းအဝိုင်း အတွင်းတွင် ဖြစ်စေ၊ ဘလော့ဖတ်သူများ နှင့် ဘလော့ကာများ ကြားတွင် ဖြစ်စေ ကြားခံ အသုံးပြုသော ဆက်သွယ်ရေး widget ဖြစ်သည်။ ပိတ်ဆို့ထားသော ဘလော့များကို RSS Feed ဖြင့် အလွယ် တကူ ဖတ်ရှုနိုင်သော Google Reader မှာလည်း ဘလော့ဖတ်ရှုသူများ အသုံးများကြသည်။ မြန်မာဘလော့ အများစုသည် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်ဖြင့် ရေးသားကြသော်လည်း ယခုအခါ တစ်ချို့သော ဘလော့များသည် မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလာကြသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဇော်ဂျီယူနီကုဒ်နှင့်ရော မြန်မာယူနီကုဒ်ဖြင့်ပါ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် မြန်မာယူနီကုဒ် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုငွေထွန်းမှ on the fly ခေါ် ယူနီကုဒ် converter ကိုရေးသား ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကို ဘလော့တွင် ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် ဖောင့်တစ်မျိုးမျိုးရှိရုံဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘလော့ဂါများသည် micro blogging ဖြစ်သော twitter ကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။
အပိုလို ၁၁ At 02:39 UTC on Monday July 21, 1969, Armstrong opened the hatch, and at 02:51 UTC began his descent to the lunar surface. The Remote Control Unit controls on his chest kept him from seeing his feet. Climbing down the nine-rung ladder, Armstrong pulledaD-ring to deploy the Modular Equipment Stowage Assembly (MESA) folded against Eagle's side and activate the TV camera, and at 02:56:15 UTC he set his left foot on the surface. The first landing used slow-scan television incompatible with commercial TV, so it was displayed onaspecial monitor andaconventional TV camera viewed this monitor, significantly reducing the quality of the picture. The signal was received at Goldstone in the United States but with better fidelity by Honeysuckle Creek Tracking Station in Australia. Minutes later the feed was switched to the more sensitive Parkes radio telescope in Australia. Despite some technical and weather difficulties, ghostly black and white images of the first lunar EVA were received and broadcast to at least 600 million people on Earth. Although copies of this video in broadcast format were saved and are widely available, recordings of the original slow scan source transmission from the lunar surface were accidentally destroyed during routine magnetic tape re-use at NASA.